काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) निको हुन लागेका पुरुषको वीर्यमा भने भाइरस रहिरहनसक्ने नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार यस अध्ययनले यौन सम्पर्कमार्फत पनि कोरोना सर्नसक्ने सम्भावना औंल्याएको छ ।
कोरोना महामारी उच्च रहेका बेला अर्थात् जनवरी र फेब्रुअरीमा साङक्यु नगरीय अस्पतालमा उपचार गराएका ३८ पूरुषहरुमा अनुसन्धानकर्ताले अध्ययन गरेका थिए । त्यसमध्ये १६ प्रतिशतको वीर्यमा कोरोनाको जीवाणु देखिएको यस अध्ययन टोलीले जर्नल जामा नेटवर्क ओपनलाई जानकारी गराएको छ । तीमध्ये ९ एकचौथाई गम्भीर अवस्था र झन्डै ९ प्रतिशत निको हुने अवस्थामा थिए ।
यो नौलो खोजि भने होइन । पुरुषको प्रजनन क्षेत्रमा यसअघि अन्य भाइरस पनि भेटिएका थिए । इबोला र जिका भाइरस दुबै विर्यसम्म फैलिएको देखिएको थियो । विर्यबाट कोरोना फैलने विषय भने अझै स्पष्ट छैन ।
‘यदि भविष्यमा सार्स–कोभ–२ यौन सम्पर्कमार्फत फैलन्छ भनेर प्रमाणित भयो भनेर रोकथामका हकमा यौन सम्पर्क गम्भीर पक्ष हुनेछ ,’ टोलीले लेखेको छ । यौन सम्पर्क नगर्ने वा कण्डमको प्रयोग गर्ने विषय रोकथामका लागि अबलम्बन गर्न सकिने यो टोलीले जनाएको छ ।
एजेन्सी । सुन्दा पनि अच्चम लाग्ने कोरोनाबाट बच्न एक जनाले सुनको मास्क बनाएका छन् । सुनको मास्क लग...
सुनै सुनको होटल, जहाँ सुनको जलप लगाइएको छ (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । होटलको विलासिताले धेरैलाई आकर्षित पारेको हुनसक्छ । तर यहाँ एउटा यस्तो होटलको कुरा गर्द...
यस्तो पनि ! अम्बिका माझीको घरमा पालेको कुखुराले चल्ला जन्माएपछि...
काठमाडौं । पहिले कुखुरा कि अण्डा भन्ने प्रश्न संसारभर चर्चामा छ । यसको उत्तर पत्ता लगाउन गाह्रो प...
माछाले यसरी मान्छेले खाने वियर खाएपछि...(भिडियोसहित)
तपाईँले माछाले वियर खाएको देख्नु भएको छ ? सायद देख्नु भएको छैन होला । अहिले सामाजिक सञ्जालमा माछा...
जब यी सुन्दरी अचानक पोर्न स्टार बनेपछि...
एजेन्सी । अस्ट्रेलियाकी पूर्व सुपरकार चालक रेनी ग्रेसी एकाएक पोर्न मुभिमा देखिएपछि निकै चर्चा भयो...
आयो माक्स लगाएर यौन सम्पर्क गर्न मिल्ने नयाँ ‘गाइडलाइन’
काठमाडौं । कोरोना लागेका व्यक्तिलाई छुन त हुन्न नै, कोरोना संक्रमितले छोएको ठाउँ छोएसम्म पनि कोरो...